उखुको मूल्य निर्धारणमा जोड- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
उखुको मूल्य निर्धारणमा जोड
मंसिर २३, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
सर्लाही — किसानले चिनी मिल सञ्चालनअघि उखुको मूल्य निर्धारण गर्न जोड दिएका छन् । चिनी मिल सञ्चालनको तयारीतिर लागेपछि उनीहरूले उखुको मूल्य तोक्न दबाब दिएका हुन् ।
चिनी उत्पादक र किसानबीच उखुको मूल्यमा सहमति भएको छैन । उनीहरूबीचको दोस्रो वार्ता शुक्रबार हुने भएको छ । उद्यमीले बढीमा क्विन्टलको ५ सय रुपैयाँसम्म दिन सक्ने संकेत गरेका छन् । किसानले भने ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी माग गरेका छन् । चिनीको भाउ वृद्धि भएकाले सोही अनुपातमा उखुको मूल्य बढाउनुपर्ने किसानको माग छ । सञ्चालकहरू भने यसरी मूल्य बढाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
उखुको मूल्य निर्धारण नभए पनि चिनी मिलले सञ्चालनको तयारी पूरा गरेका छन् । धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले सञ्चालनअघि गर्नुपर्ने डोगा पूजा सकेको छ । मिलका सञ्चालक ज्ञानप्रसाद भट्टराईले क्रसिङका लागि मिल पूर्णरूपमा तयार रहेको बताए । ‘उखुको मूल्य तय हुने प्रतीक्षा गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मिल सञ्चालनका लागि तयार भइसक्यो । किसान र हामी छिटो क्रसिङ होस् भन्नेमा छौं ।’ गत वर्ष उखुको मूल्य ४ सय ४८ रुपैयाँ रहेकामा यो वर्ष बढ्ने निश्चित भए पनि किसानको माग र उद्यमीले दिने मूल्यमा धेरै अन्तर भएपछि सहमति हुन सकेको छैन ।
उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले उखु काट्ने बेला भइसकेकाले छिटो मूल्यमा सहमति हुनुपर्ने बताए । उनले चिनीको भाउ वृद्धिको अनुपातमा उखुको मूल्य बढाउनुपर्ने वैज्ञानिक माग उद्यमीले मान्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘चिनीको भाउ घट्यो भनेर यसअघि उखुको मूल्य घटाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले चिनीको मूल्य ४० प्रतिशत बढेकाले सोहीअनुसार उखुको मूल्य बढाउनुपर्छ ।’
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७३ ०९:५५
कुखुरा मासुमा १४ जिल्ला आत्मनिर्भर
मंसिर २३, २०७३ वीरेन्द्र केसी
कास्की — पश्चिमाञ्चलका १४ जिल्ला कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर बनेका छन् । मनाङ र मुस्ताङबाहेक अन्यमा जिल्लाकै उत्पादनले धानेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।
छोटो समयमै राम्रो आम्दानी हुने भएपछि कुखुरापालन व्यवसायमा आकर्षण बढ्दो छ ।
पश्चिमाञ्चलमा ब्रोइलर कुखुरा पाल्नेको लहर नै चलेको छ । ‘तराई र पहाडी जिल्लामा बर्सेनि उत्पादन २० प्रतिशतले बढेको छ,’ निर्देशनालयका पशु विकास अधिकृत नारायणकाजी गुरुङले भने, ‘मनाङ र मुस्ताङमा चिसोका कारण कुखुरा उत्पादन कम भएर त्यहाँ मात्रै छिमेकी जिल्लाबाट जान्छ । बाँकी सबै जिल्ला आत्मनर्भिर छन् ।’ कहिलेकाहीं उत्पादन घटबढ भएर एउटा जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा लाने, ल्याउनेबाहेक जिल्लाकै उत्पादनले थेगेको उनले बताए ।
कास्की जिल्ला दुई वर्षअघि नै कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको थियो । गाउँ र सहरमा ठूला फार्म खुल्ने क्रम बढिरहेको छ । सामान्य परिवारले दुई/चार हजार लगानी गरेर त्यसकै आम्दानीले घर खर्च चलाउन सजिलो व्यवसाय बनेको छ । कास्कीका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सुरेश श्रेष्ठका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो ।
गत आवमा १ हजार ७ सय ३८ टन कुखुरा उत्पादन भएको थियो । ‘गाउँका सामान्य व्यक्तिले ५ सय हजार रुपैयाँको लगानीमा कुखुरा पालेका छन्,’ उनले भने, ‘यसबाट घर खर्च राम्ररी चलेको छ ।’ साना ठूला गरी कास्कीमा २ सय ८५ वटा फार्म दर्ता छन् । त्यसभन्दा बढी फार्म दर्ताबिना नै चलेको उनले बताए ।
कुखुरापालनमा राम्रो आम्दानी कारण यस व्यवसायमा लाग्ने धेरै छन् । प्रहरी सेवाबाट अवकाशप्राप्त फैदसिंह भण्डारीले पोखरामा कुखुरापालन गरेका छन् । यो व्यवसायले छोटो समयमै सन्तुष्टि दिएको भण्डारीले बताए । ‘कुखुरापालनमै उज्ज्वल भविष्य देखें,’ उनले भने, ‘थोरै लगानी, कम मिहिनेतबाटै राम्रो फाइदा भएको छ । वर्षमा घर खर्च कटाएर चार लाख वचत भएको छ ।’ पोल्ट्री फार्मले धेरैलाई विदेश जानबाट रोकेको उनले बताए । त्यसरी नै डा. आशिष भट्टराईले बाघमारामा सञ्चालन गरेको फार्ममा ८० हजार लेर्यस कुखुरा छन् । उनले हालै गोरखामा खोलेको फार्ममा डेढ लाख कुखुरा छन् । दैनिक ६० हजार अण्डा उत्पादन भइरहेको उनले बताए ।
पश्चिमाञ्चलका १४ जिल्लामा ५ सयसम्म कुखुरा फार्म दर्ता भएका छन् । पशु कार्यालयमा दर्ता नगरी फार्म चलाएका पनि उत्तिकै रहेको निर्देशनालयका पशु चिकित्सक डा. शीतलबाबु श्रेष्ठले बताए । व्यावसायिक रूपमा गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडाभन्दा मासुका लागि पालिने ब्रोइलर कुखुराको व्यवसाय फस्टाउँदै गएको उनले बताए ।